ငြိမ်းချမ်းအေး – အခြေခံ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှု | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မောင်စိုး - လွမ်းရစ်ဝေသော နေ့များ ညများ ဘဝပေါင်းများစွာ - အပိုင်း ၉
ဂါမဏိ ● စစ်တပ်ကို အသစ်ပြောင်းခြင်း (စစ်တပ်ကို ပြောင်းမရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား)
လှကျော်ဇော ● ဖေဖေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်များ
မာမာအေး - ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် - အမှတ် (၅၆၄)
ငြိမ်းချမ်းအေး – အခြေခံ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှု
အခြေခံ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှု
မေ ၁၆၊ ၂၀၁၄
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အဓိက ပြဿနာ အားလုံးရဲ့ ရေသောက်မြစ်ဟာ ကျင့်သုံးတဲ့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်၊ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အားလုံးနဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွှယ်နေတဲ့ မူဝါဒ၊ နိုင်ငံရေး စနစ် အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ စနစ် အပေါ်မူတည်ပြီး တွဲလျက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ မူဝါဒ အသီးသီး၊ အတွေးအခေါ် သဘောတရား အသီးသီးကနေ အခြား နိုင်ငံ့ ကဏ္ဍ တွေ ဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စတာတွေရဲ့ တိုးတက်မှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။
ပြဿနာ တရပ် ကို အဖြေရှာတဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်ပေါ်အခြေတည်လာစေခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ အကျိုးဆက် နဲ့ လက်ရှိ ပကတိ အခြေအနေကို လေ့လာသဘောပေါက်ထားမှသာ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေတခုကို ရှာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒီသဘောဟာ သင်္ချာပုစ္ဆာ တပုဒ် ကို အဖြေရှာ တဲ့နေရာက စလို့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာ ကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာ အထိ အတူတူပါပဲ။
ဗမာ့ နိုင်ငံရေး ဓလေ့မှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဟာ ရာစုဝက်ကျော် ရှင်သန်ခဲ့ပြီး ဒီစနစ်ဆိုးရဲ့ ဓလေ့၊ အတွေးအခေါ် ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လက္ခဏာ တွေဟာ မျက်မှောက် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်လို့ နာမည်အခေါ်တပ်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ ယခု အချိန်ထိ ဆက်လက် အမြစ်တွယ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ဖို့ရာမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အခြေတည်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ အချက်များစွာ နဲ့ စနစ်ဆိုးရဲ့ အကျိုးဆက်များစွာကို အခြေခံကျကျ ဦးစွာ သဘောပေါက်နားလည်ထားဖို့ လိုတယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုင်းပြည်မှာ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဟာ ဗမာ့ သမိုင်းခေတ်ဦး တိုင်းပြည်တည်ထောင်ချိန်ကစပြီး စစ်အင်အားကို အခြေပြုခြင်းဖြင့်သာ နိုင်ငံ့တဝှမ်း လူမျိုးစုတွေရဲ့ စည်းလုံရေးကို ဖော်ဆောင် နိုင်ငံထူထောင်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာ၊ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှု ဖြစ်စဉ်၊ တနည်းအားဖြင့် စစ်တပ် အခန်းကဏ္ဍ တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်ခဲ့ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ စည်းလုံးမှု ပြိုကွဲနိုင်တဲ့ နောက်ခံ အခြေအနေ၊ ရာစုနှစ်များစွာ စွဲကပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားလွှမ်းမိုးမှု အပေါ် ထားရှိတဲ့ အကြောက် သံသယ နဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ် ပြင်းထန်မှု၊ စစ်သူရဲကောင်း ဝါဒ ကိုးကွယ်မှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ လူစွဲ၊ အယူအဆ ဝါဒစွဲ ပြင်းထန်မှု၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ မဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ပညာ အခြေခံတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး မရရှိခဲ့ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းချက်ကြီးများကြောင့် လို့ ယေဘုယျ ဆိုနိုင်တယ်။
ရှေး စစ်ဘုရင်များ ခေတ်ကတည်းက အမြစ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ လက်နက်ဖြင့် ပြဿနာ အရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းမှု ဓလေ့၊ ကိုလိုနီခေတ် ကျွန်ဘဝ လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် နိုးကြားမှု၊ ဝါဒရေးရာပြင်းထန်မှု၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး မှာ ပြည်သူအများစုရဲ့ လေးစားချစ်ခင်မှုခံခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော် စတဲ့ အချက်တွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦး နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယ်။
လွတ်လပ်စ ဗမာပြည်မှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြန်မာ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အသီးသီးရဲ့ နိုးကြားနေတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒဟာ လူမျိုးရေး အမြင် ကျဉ်းမြောင်းမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာတာကြောင့် လူမျိုးစု အချင်းချင်းကြား ပဋိပက္ခဟာ ကြီးမားလာတယ်။ ဒီအနေအထားမှာ အရိုးစွဲလာခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင် ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်းဟာ ပိုမို အသက်ဝင် အသုံးချလာတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အယူဝါဒရေးရာ စစ်ပွဲတွေသာမက တိုင်းရင်းသားရေးရာ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတွေပါ ပေါ်လာပြီး တိုင်းပြည်ဟာ အချုပ်အခြာ အာဏာတည်စမှာပဲ ပြည်တွင်းစစ်နွံထဲ နစ်ခဲ့ရတယ်။ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို မရွေးချယ်ဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ အဖြေရှာဖို့ ကြိုးစားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များဟာလည်း မြန်မာ အများစု ကြီးစိုးတဲ့ အစိုးရ ရဲ့ နိုင်ငံရေး သဘောထား မမှန်ကန်မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာခွဲဝေမှု မညီမျှမှု၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို မျှတစွာ ခွဲဝေနိုင်ခြင်းမရှိမှု၊ အခြေခံဥပဒေ မှာကိုက တပြည်ထောင်စနစ် သဘောသက်ရောက်နေမှု တို့ကြောင့် အရာမထင်ခဲ့ဘဲ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ဆက်လက် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့ရတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ကို ဦးဆောင်တိုက်နေရတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ပိုကြီးမားလာခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင် လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ဦးမှာပဲ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားကျူးကျော်ခံရမှု တရုတ်ဖြူအရေးအခင်းဟာ စစ်တပ်ရဲ့ အရေးပါမှုကို တိုးလာစေခဲ့တယ်။ တရုတ်ဖြူ ကျူးကျော်မှု ခုခံကာကွယ်စစ် အကြောင်းပြချက်၊ စစ်ပွဲရံပုံငွေခေါင်းစဉ်အောက်မှာ စစ်တပ်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို စတင်ချုပ်ကိုင်ခွင့်ရလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွေမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ် ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မှုရဲ့ သဘော နဲ့ အရသာ ကို စတင်သိလာခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ နိုင်ငံပြိုကွယ်မယ့် အန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ဝါဒဖြန့် မုသား စကားလုံးတွေနဲ့ စစ်တပ်ကြီးစိုးရေးဝါဒ၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို တိုင်းပြည်မှာ စတင်ဖော်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်။
စတင် ဖော်ဆောင်ချိန်မှာ နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်တခုကို အပေါ်ယံ ဟန်ပြ အနေနဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အတွင်းသဘောမှာတော့ တိုင်းပြည်မှာ စစ်တပ်ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍ အစဉ်အမြဲ တည်မြဲစေဖို့အတွက် စစ်ဝါဒကြီးစိုးရေးဝါဒ နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လူထုဆက်သွယ်ရေး ကြားခံ အမျိုးမျိုးမှ တဆင့် အကြီးအကျယ် တင်သွင်းလာခဲ့တယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ အရေးပါမှု မလျော့ပါးစေဖို့ရာ လူမျိုးစု ပဋိပက္ခ ပြဿနာကိုလည်း ဖြောင့်မတ်၊ မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေး သဘော နဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားဘဲ၊ သဘောထား တင်းချီ တခါ၊ လျှော့ချီ တလှည့် နိုင်ငံရေး ၊ စစ်ရေးကစား ကြိုးရှည်ရှည်လှမ်းထားခဲ့ကာ ပြည်တွင်းစစ် ကို မွေးထား စစ်မီး ဆက်လက် တောက်လောင်စေခဲ့တယ်။
ဒီလို ပြည်သူက အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ် ဆိတ်သုန်းပျောက်ကွယ် မှု နဲ့ အတူ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်း တခုတည်းကသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရပ်ရပ်မှာ အတိုင်းအဆမရှိ အာဏာရ အလုံးစုံ ချုပ်ကိုင် ခြယ်လှယ်ထားနိုင်မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အလားအလာကောင်းတွေများစွာ ရှိခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ ဘက်ပေါင်းစုံက ချွတ်ခြုံကျ၊ အလုံးစုံ ပျက်စီးနေတဲ့ ကျရှုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။
ဒီလို အနေအထားနဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ မရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူထုပညာပေး နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဟာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ သဘော နဲ့ ဆန္ဒ မှာသာ လုံးလုံး မူတည်နေတဲ့အတွက် အုပ်စိုးသူ ဖော်ဆောင်စေချင်တဲ့ ပုံစံ၊ စနစ် နဲ့ အတွေးအခေါ်သာ လူထုကြား အဓိက ရှင်သန်လာခဲ့ရတယ်။ ထို့အတူ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းက စလို့ နိုင်ငံ့အရေးမှာ ရှေ့တန်းက ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်ကျောင်းသား လူတန်းစားကိုလည်း အုပ်ချုပ်သူ စစ်အစိုးရ ဟာ အာဏာကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်တဲ့ ပုန်ကန်သူ အစုအဖွဲ့ အဖြစ် မြင်ကာ ရန်သူသဖွယ်ဆက်ဆံ၊ အမျိုးမျိုး ဖိနှိပ် သင်းကွပ်ခြင်း သာ စနစ်တကျ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် တိုင်းပြည်မှာ အတွေးအခေါ် လွတ်လပ် ကျယ်ပြန့်၊ အသိ ဉာဏ် မြင့်မား ရင့်သန့်တဲ့ ပညာအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖော်ဆောင်နိုင်မှု အားနည်းခဲ့ရတယ်။
ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်မှာ အခြေခံ တည်ရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ သတင်းမီဒီယာ၊ လူမှု့အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူ စတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ မဏ္ဍိုင်အသီးသီး လွတ်လပ်သီးခြား ရပ်တည် ဖော်ဆောင်ကာ အပြန်အလှန် အမှီသဟဲ ပြု ဟန်ချက်ညီ ထိန်းညှိ၊ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှု မျိုး နှစ်ပေါင်းများစွာ မဲ့လာခဲ့တဲ့အတွက် ကဏ္ဍအသီးသီးက အစုအဖွဲ့ အသီးသီးရဲ့ အရည်အချင်း၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် နဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ အကန့်အသတ်အများကြီးနဲ့ တည်ရှိနေခဲ့တယ်။
ဒီလိုအခြအနေကနေ အစိုးမရတဲ့ အစိုးရ၊ တာဝန်မကျေတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ၊ စနစ်မကျတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ မတရားတဲ့ တရား ဥပဒေ၊ ယိမ်းယိုင် ပျက်စီ ခြစားနေတဲ့ တရားစီရင်ရေး စနစ်၊ ခိုင်မာတဲ့ မူမရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း၊ တာဝန်မယူ အရည်အချင်းမပြည့်တဲ့ သတင်းမီဒီယာ၊ အားနည်းတဲ့ လူမှု့အဖွဲ့အစည်း၊ အဆင့်အတန်းမမီ၊ မလွတ်လပ်၊ ဘောင်ကျဉ်းတဲ့ ပညာရေးစနစ် အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ မှောင့်မှား၊ အတွေးအခေါ် မရင့်ကျက်၊ တာဝန်မသိ၊ ကျင့်ဝတ်မဲ့၊ အခွင့်အရေးနားမလည်တဲ့ ပြည်သူတွေကို မျိုးဆက် နှစ်ဆက် စာ မက မွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
ဒီအခြေအနေဟာ တိုင်းပြည်မှာ အမြစ်တွယ်ခဲ့တဲ့ ပင်မရေသောက်မြစ် ရောဂါ နိုင်ငံရေး စနစ် ဆိုးကြောင့် တွဲလျက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘေးထွက် အကျိုးဆက် ရောဂါ အဖုံဖုံ ရဲ့ သွင်ပြင် လက္ခဏာ စုံ ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိ ဗမာ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာ ရှိတဲ့ အစိုးရ အပါအဝင် လူမှု နိုင်ငံရေး အစုအဖွဲ့ အုပ်စု၊ လူမှုအလွှာအသီးသီက ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပကတိ အခြေအနေ ပြဿနာများလည်း ဖြစ်တယ်။
ဒီလို တိုင်းပြည် ပြဿနာရဲ့ အကြောင်း၊ အကျိုး နဲ့ နောက်ခံ အခြေအနေကို လက်ရှိအစိုးရ အပါအဝင် ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အုပ်စု အသီးသီးက ပကတိ အမှန်အတိုင်း သိနားလည်၊ မျက်ကွယ်မပြု မြင်လာနိုင်စွမ်းတဲ့ အချိန်ကျမှာသာ မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုက နောက်က လိုက်လာနိုင်မှာပါ။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် မကောင်းကြောင်းကို တိုင်းပြည် မွဲပြာအကျခံပြီး သိခဲ့လို့ ယခင် စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကနေ ပြည်သူက စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့် ရှိတယ် (ဆိုတဲ့)၊ ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုတယ် (ဆိုတဲ့)၊ ပြည်သူ့အစိုးရ စနစ် ကို ဖော်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးခုဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး ကို သီးခြား ခွဲထုတ်လိုက်နိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အရပ်သား အစိုးရ (ယခုလောလောဆယ် စစ်တပိုင်း အစိုးရ) နဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာအားလုံးအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းမှု မဟုတ်လားလို့ ဆိုလာခဲ့ရင် အပြည့်အဝ မှန်တယ်လို့ မဆိုနိုင်သေးပါ။ မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းမှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကို စရောက်တဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စဉ်တခုသာ လို့ပဲ ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ယခင် စစ်အစိုးရ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီး ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ စစ်ဝါဒ ထာဝရ ရှင်သန်စိုးမိုးရေး လမ်းစဉ် အခြေပြု ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေက ရှေ့ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ရမယ့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု လမ်းခရီးအတွက် ကြီးမားတဲ့ အဟန့်အတား အနေနဲ့ ရှိနေတယ်။ နိုင်ငံပြန်လည် တည်ထောင်မှု အခြေခံအုတ်မြစ် မမှန်တဲ့အတွက် အခြေမခိုင်ရင် အမြင့်ကို မလှမ်းနိုင်တဲ့သဘော၊ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဒီအချက်ဟာ နိုင်ငံ့အနာဂတ်မှာ တိုင်းရင်းသာ လူမျိုးစု၊ လူနည်းစု အားလုံး ဆူကြုံနိမ့်မြင့်မရွေး ငြိမ်းချမ်းစည်ပင်ဝပြောရေးအတွက် ကြိုးစားဖော်ဆောင်ရမယ့် အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ အစုအဖွဲ့အသီးသီး ရဲ့ ရှေ့ခြေလှမ်းတွေကို တုတ်နှောင်ထားတဲ့ သံမဏိ ကြိုးတွေလည်း ဖြစ်တယ်။
ဒီအခြေခံဥပဒေ နှောင်ကြိုးဟာ အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာ တခုအထိသာ တည်ရှိမယ့် အခက်အခဲ အတားအဆီး ဖြစ်တယ်၊ နောင်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေလျှော့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှာပါလို့ ယူဆထားချက်တွေဟာလည်း စစ်အုပ်စု ကျားကြီး သနားမှ နွားချမ်းသာမယ့် သဘော၊ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ခြေခြေမြစ်မြစ် မပြနိုင်၊ ရောရမ်းမှန်းဆ စိတ်ကူးယဉ်နေရတဲ့ နေ့ခင်းအိမ်မက် အဆင့်ထက် မပိုကြောင်းဟာ စစ်လွှတ်တော် နိုင်ငံရေး သက်တမ်းကြာလာလေ ထင်ရှားလာလေ ဖြစ်တယ်။ ယခုလို “၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ” နီးချိန် မှာ ပြင်ဆင်မှု မရှိသေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တွေ၊ ထပ်မံ တင်းကျပ်တဲ့ မှုလီ အကန့်အသတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို ကြည့်ရင် ပိုလို့တောင် ထင်ရှားလာတယ်။
စစ်ဝါဒ မဏ္ဍိုင် အခြေခံဥပဒေ ကို အချိန်ကာလ တခုမှာ ပြင်နိုင်တယ်ဆိုဦးတော့ အဆုံးစွန်သော စစ်မှန်တဲ့ တကယ့် အပြောင်းအလဲ၊ မှန်ကန်တဲ့ ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှုအဆင့်ကို မရောက်သေးပါ။
အကြောင်းက ဗမာ့ လူမှုအဆောက်အအုံရှိ စစ်အုပ်စုနောက်ခံ အစိုးရ အပါအဝင် လူ့အလွှာအားလုံးရဲ့ အတွင်း အဇ္ဈတ္တသန္တာန်မှာ ရာစုနှစ်ဝက်ကျော် အရိုးစွဲ စိမ့်ဝင်ရင်းနဲ့ ယုံကြည်မှတ်ယူခံယူလာနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုး အကျင့်စရိုက်၊ အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ် ဟောင်းတွေကို အခြေခံကျကျ တွန်းလှန် ဖယ်ရှား တော်လှန်နိုင်စွမ်း မရှိရင် ဒီအပြောင်းအလဲဟာ အကြောင်းကိုသိလို့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ ပြောင်းလဲတဲ့ ယုတ္တိစဉ် ပြောင်းလဲမှုသဘော မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်အုပ်စု နဲ့ အပေါင်းအပါ တသိုက် အနေအစားချောင်ဖို့ သက်သက် အပေါ်ယံ အရေခွံပြောင်းလဲမှု၊ အတွင်းအနှစ် ဗလာ အကာသက်သက် အပြောင်းအလဲပဲ ဖြစ်နိုင်လို့ ဖြစ်တယ်။
ဒီသဘောမျိုး၊ ဒီလို အပြောင်းအလဲမျိုးနဲ့တော့ တိုင်းပြည် ရဲ့ နာတည်ရှည် ရောဂါကြီး အစုံစုံ မှ အစွယ်အပွား အဖုအပိန့်၊ အရောင်အရမ်း တချို့ကို ပျောက်အောင် ကုသကောင်း ကုသနိုင်ပေမယ့် ပင်မရောဂါကိုတော့ အမြစ်ပြတ် ကုသနိုင်စွမ်း မရှိပါ။
ဒီသဘောနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူမျိုးစု တိုင်းရင်းသားအရေး၊ လူမှု၊ စီးပွား၊ ကျန်းမာ၊ ပညာ ပြဿနာ အစုံစုံကို စနစ်ဆိုး မြေလှန် အဆုံးတိုင် အောင်မြင်ပြီးမြောက် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိမှာမဟုတ်ပါ။ ဒီလို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေဟာလည်း ထပ်ကျော့နေမှာသာဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက် ဆိုးကျိုးတွေဟာလည်း ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာသာ ဖြစ်တယ်။
ဒါဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပုံစံပြောင်း တည်ရှိခြင်း တမျိုးသာ ဖြစ်နေကာ ဒီမိုကရေစီ သဘောထား၊ အတွေးအခေါ်၊ အခွင့်အရေး အနှစ်သာရ ပြည့်ဝကာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း၊ စံညွှန်းမီ လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာ၊ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး အသိအမှတ်ပြု၊ လူမှု၊စီးပွား၊ပညာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး၊ ယဉ်ကျေးငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောတဲ့ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် နိုင်ငံကြီး တနိုင်ငံ ကမ္ဘာအလယ်မှာ ဖော်ဆောင်လာနိုင်ဖို့ဟာ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာ ဖြစ်တယ်။
တိုင်းပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင် စရိုက် နဲ့ သူ့ရဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာ တွေကို တော်လှန် နိုင်တဲ့ အခြေခံ အတွေးအခေါ် အပြောင်းအလဲ အမှန်တကယ် ဖော်ဆောင်လာနိုင်ဖို့က ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းက လူတဦးချင်းမှာ ကျင့်ဝတ် တာဝန် ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ စွဲကပ်နေတဲ့ စနစ်ဆိုးစော်နံ အကျင့် စရိုက်၊ အတွေးအခေါ် အပုပ်အပွ အသိုးအဆွေး တွေကို ခွာချနိုင်ဖို့က တဦးချင်းက စ ရမှာပါ။ အခြေခံ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှု “Mindset Change” က ဘောင်းဘီချွတ်၊ အရပ်သား အရေခြုံ သမ္မတ အတွက် လိုသလို လူတဦးချင်း အတွက်လည်း လိုတယ်။
ဆောင်းပါး အစမှာ ဆိုခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် စတင် အမြစ်တွယ် ရခြင်း အကြောင်း သဘောတွေကို လူ့အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ လူတဦးချင်း က နားလည် စွန့်ပစ်နိုင်ရပါမယ်။ စနစ်ဆိုး ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အတွင်း သဘောကို ထိခိုက် သက်ရောက်ခဲ့သလို အခုတဖန် လူ့အသိုင်းအဝန်းက လူတဦးချင်း ရဲ့ အတွင်းစိတ် ပြောင်းလဲမှုကနေ စနစ်ဆိုးကို အရင်းတိုင် ပြင်ဖို့ ပြန်လည် ကြိုးစားရမှာပါမယ်။ ဒါမှသာ အဆိုးသံသရာ “Vicious Circle” က အလုံးစုံ လွတ်မြောက်နိုင်မှာပါ။
ပဒေသရာဇ် စစ်ဘုရင် သူရဲကောင်း ဝါဒ မှိုင်းတိုက်ခံ ထိထားလို့ စစ်ဘင်ခရာ သံလေးကြား၊ စစ်ချီတေးလေးများ ဟစ်ရင် စစ်သွေးလေး ကြွချင်၊ အလံကလေး တလူလူ လွှင့်ရင် အမျိုးဂုဏ် ဇာတိ မာန် တွေ ထ ချင်၊ ပုဂံ နောက်ခံပုံတွေပြ “ခမ်းနားလေသော သမိုင်းကြောင်းများ..” အော်ရင် “မဟာ မြန်မာ.. ကွ” လို့ ကယောင်ချောက်ချား ကြွေးကြော်ချင်တဲ့ မိမိ စိတ်အခံ ကိုပဲ အရင် ပြင်ဖို့ ကြိုးစားစေချင်ကြောင်း ထောက်ပြရင်း “အခြေခံ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှု” မရှိ မဖြစ် လိုအပ်ပုံ သဘောကို တင်ပြလိုက်ကြောင်းပါ။
(ခေတ်မောင်း အွန်လိုင်းစာစောင် အတွဲ (၁) ၊ အမှတ် (၃)၊ ဇူလိုင်၊ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ခှနှစ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ ယခု ပြန်လည် တည်းဖြတ် ပြင်ဆင်ကာ မိုးမခတွင် ထပ်မံဖော်ပြသည်။)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ရသဆောင်းပါးစုံ, ငြိမ်းချမ်းအေး
3 Responses to ငြိမ်းချမ်းအေး – အခြေခံ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှု
Thet Naing on May 16, 2014 at 6:26 pm
I agree with you. Really I do.
pn wara on May 17, 2014 at 12:04 pm
စစ်ဝါဒီတွေ ကြီးစိုးလာအောင် လုပ်ခဲ့တာက ရှေးဘုရင်တွေလဲမဟုတ်သလို လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ တွေလဲ မဟုတ်ဟု ယူဆပါတယ်- တကယ်တန်း စစ်ဝါဒ စတင်အမြစ်ချခဲ့တာက ဖဆပလ ခေါင်းဆောင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုပင်ဖြစ်တယ်- ဗိုလ်နေ၀င်းက ၅၈ မှာ အာဏာသိမ်းဘို့ ကြိုးစားတာကို အာဏာမသိမ်းဘို့အာဏာ ကို စနစ်တကျလွှဲပေးမယ်- စစ်တပ်က တာဝန်ယူပြီး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ ပေးပါဆိုပြီး ဗိုလ်နေ၀င်း ကို အာဏာပေးခဲ့တယ်- ၆၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ ၅၈ မှာ အာဏာသိမ်းဘို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ ဗိုလ်နေ၀င်း ကို ရာထူးမှ အနားမပေးဘဲ လူယုံအဖြစ်တောင် သတ်မှတ်ပြီးတော့ သူကောင်းတောင်ပြုခဲ့သေးတယ်- နောက်တော့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ ဒီနေ့ အထိ နာလံမထူနိုင်အောင် တိုင်းပြည်က ချောက် (ဂျောက်) ထဲ ကျ ခဲ့တယ်- ဒုတိယ တရားခံက တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအပေါ် စိတ်ဝင်မှူ မရှိခြင်းဘဲဖြစ်တယ်—
Zawni Gyi on May 18, 2014 at 9:15 am
ကျွန်တော်မကောင်းဘူး… ကို ပြန်ဆိုမိပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက မုန့်လုစားကြတယ်။ ကြီတော့ လုပ်ပိုင်ခွင်/လိုင်စင် လုစားနေကြတယ်။ လူငယ်တွေပဲ လဘ်မစား၊ မပေးမကမ်း၊ မှန်မှန် IT, Training & Media လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရင်း ဒီလူငယ်တွေပဲ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း IT ဆရာတွေ၊ သူဌေးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ ကိုယ်မလုပ်တတ်အောင် ကြွမ်းကျင်တဲ့ လူငယ်တွေကို မြေတင်ျြေမှာက်နိုင်သူများ .. မြန်မာပြည်မှာ အဆင်ပြေလာပါမယ်။ အခုတော့ စိတ်ပျက်စရာတွေ အများကြီးပါ။ မြန်မာပြည် ၂လောက် နေထိုင်၊ ပြောဆို၊ ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်တဲ့အခါ အားဏာပိုင်များရဲ့ Mindset တွေမှာ
၁။ လူစိမ်းအဝင်မခံခြင်း (နိုင်ငံခြားမှ၊ သူတို့အဆင်ပြေသူများကို ပါဝင်စေခြင်း)
၂။ ကိုယ် (ကိုယ့်ဌာန) မလုပ်တတ်၊ မလုပ်နိုင်ရင် ..တခြားလူ (တခြားဌာန)ကို ပေးမလုပ်ခြင်း၊
၃။ မလုပ်တတ်တာတွေ များနေခြင်း …တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ … ကိုငြိမ်းချမ်းအေးတို့လိုလူတွေ အနီးကပ်ပြောဆို ဖို့လိုတယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ…